राष्ट्रपति थिओडोर रॉसवेल्ट जीवनी 26 औं राष्ट्रपति
थिओडोर रॉसवेल्ट - संयुक्त राज्य अमेरिका को छत्तीसवीं राष्ट्रपति
थिओडोर रॉसवेल्ट (1858-19 190) अमेरिकाको 26 औं राष्ट्रपतिको रूपमा सेवा गर्थे। उहाँ एक विश्वसनीय बस्टर र प्रगतिशील राजनीतिज्ञको रूपमा चिनिनुभयो। उहाँको आकर्षक जीवन स्पेनी अमेरिकी युद्धको दौडान रोटो राइडरको रूपमा सेवा गर्दै। जब तिनले पुन: चयनको लागि चलाउन निर्णय गरे, उनले आफ्नो तेस्रो पार्टी बुल मोस पार्टीलाई उपनाम दिए।
थ्योडोर रोोस्लेल्टको बचपन र शिक्षा
अक्टोबर 27, 1858 मा न्यूयोर्क शहरमा जन्मिएको, रोजोस्वेल्ट अस्थमा र अन्य रोगहरूको साथ धेरै बिरामी बढ्यो।
उहाँले ठूलो हुनुभयो, उहाँले प्रयोग गरे र आफ्नो संविधान निर्माण को लागि मुक्केबाजी र मुक्केबाजी गरे। तिनका परिवारले आफ्ना युवाहरूलाई युरोप र मिश्रलाई धनी यात्रा गरिरहेको थियो। उनले आफ्नो प्रारम्भिक शिक्षा आफ्नो चाचीबाट 1876 मा हार्वर्ड प्रवेश गर्नु अघि अन्य शिक्षकहरूको एक साथ साथ प्राप्त गर्यो। स्नातक पछि उनी कोलम्बिया कानून स्कूल गए। त्यहाँ त्यहाँ एक वर्ष बसिसकेपछि उनको राजनीतिक जीवन सुरू गर्न छोड्यो।
Roosevelt थिओडोर रोोस्वेल्ट को छोरा थियो, श्रीमती, एक धनी व्यापारी थियो, र जर्जिया देखि एक दक्षिणी मार्था "Mittie" बुलोच जो कि संदिग्ध कारण सहानुभूति थियो। उहाँका दुई बहिनीहरू र एकजना भाइ थिए। उनको दुई पत्नी थिए। उनले 27 अक्टोबर, 1880 मा उनको पहिलो पत्नी एलीस हतावे लीलाई विवाह गरे। उनले बैंकरको छोरी थिए। उनी 22 वर्षको उमेरमा मरे। उनको दोस्रो पत्नी एडिथ कर्मिट क्यारो नामक थियो। उनी थोरोडोरमा अर्को ढोका खोले। उनीहरूले डिसेम्बर 2, 1886 मा विवाह गरे। रोसवेल्टले आफ्नो पहिलो पत्नीले एलिस नाउँ गरेकी एक छोरी थिइन्।
उनले राष्ट्रपति भए तापनि उनी व्हाइट हाउसमा विवाह गरे। तिनको दोस्रो पुत्रले चार छोरा र एक छोरी थिइन्।
प्रेसीडेंसी भन्दा अघि थिओडोर रोोस्वेल्टको क्यारियर
1882 मा, रोस्वेल्ट न्यूयर्क स्टेट विधानसभाको सबैभन्दा सानो सदस्य बने। 1884 मा उनी डकोटा क्षेत्रमा गए र एक पशुपालन खेतीको रूपमा काम गरे।
1889-1895 बाट, रोजोस्वेल्ट अमेरिकी नागरिक सेवा आयुक्त हुनुहुन्थ्यो। उनी न्यूयर्क शहर पुलिस बोर्डको अध्यक्ष थिए, 1899-97र त्यसपछि नौसेनाको सहायक सचिव (1899-9 8)। उहाँले सेनामा सामेल हुन इस्तीफा गर्नुभयो। उनले न्यूयर्कका राज्यपाल (1898 9-00) र मार्च-सेप्टेम्बर 1901 सम्म उपाध्यक्षलाई निर्वाचित गरे जब उनी राष्ट्रपति पदमा सफल भए।
रोस्वेल्ट अमेरिकी स्वयंसेवी कहाली रेजिमेन्टमा सहभागी भएको थियो जसलाई स्पेनी-अमेरिकन युद्धमा लड्नका लागि रोटो राइडर्स भनिन्थ्यो। उनले मे 1 सेप्टेम्बर, 1899 देखि सेवा गरे र छिट्टै बृहस्पति बन्नुभयो। 1 जुलाईमा, उहाँ र अरे राइडर्सले सान जुआनमा केटलले हिललाई चार्ज गर्नुहुने ठूलो विजय थियो । उहाँ सैंटियागोको कब्जाकारी सेनाको भाग हुनुहुन्थ्यो।
सेप्टेम्बर 6, 1901 मा गोली मारेर राष्ट्रपति मक्केलीले मृत्यु भएको बेला 14 सेप्टेम्बर 1901 मा रुसवेल्ट राष्ट्रपति बने। उनी 42 वर्षको उमेरमा राष्ट्रपति बनेका सबै भन्दा सानो व्यक्ति थिए। उनी 1 994मा रिपब्लिकन नामांकनको लागि स्पष्ट छनौट थियो। चार्ल्स डब्ल्यू फेयरबैंकको उपाध्यक्ष उनको उपाध्यक्ष थियो। उनले डेमोक्रेट एल्टन बी पार्करको विरोध गरे। दुवै उम्मेदवारहरूले प्रमुख मुद्दाहरूबारे सहमति गरे र अभियान व्यक्तिगत व्यक्तित्वमा बनिन्। रुसवेल्टले 476 मतदाता मतदानबाट 336 लाई सजिलै जित्यो।
थोरै रमाइलो हुन्छ
राष्ट्रपति रोस्वेल्टले 1900 को पहिलो दशकको सबैभन्दा बढी सेवा गरे। उनी पनामामा नहर निर्माण गर्न कटिबद्ध थिए। कोलम्बियाबाट स्वतन्त्रता प्राप्त गर्न अमेरिका अडान पनामा। त्यसपछि अमेरिकाले नयाँ स्वतन्त्र पनामाको साथ एउटा संधि सिर्जना गर्यो र नहर क्षेत्रलाई 10 मिलियन डलर र वार्षिक भुक्तानीको विनिमयमा प्राप्त गर्यो।
मोनरो सिद्धान्त अमेरिकी विदेश नीतिको कुञ्जीमा एक हो। यो भन्नुहुन्छ कि पश्चिमी गोलार्ध विदेशी विदेशी मुद्रामा सीमित छ। रोसवेल्टले रोसवेल्ट कोटोरीलाई सिद्धान्तमा थप्यो। यो भने लैटिन अमेरिकामा मोनरो सिद्धान्त लागू गर्न आवश्यक भए यो यो बल संग हस्तक्षेप गर्न अमेरिकाको जिम्मेवारी थियो। यो 'बिग स्टिक डिप्लोमेसी' को रूप मा जानिन्छ को एक अंश थियो।
1904-05 देखि रूसी - जापानी युद्ध भयो।
Roosevelt दुई देशबीच शान्तिको मध्यस्थ थियो। यसको कारण, उनले 1906 नोबेल शान्ति पुरस्कार जिते।
कार्यालयमा हुँदा, रोजोस्वेल्ट उनको प्रगतिशील नीतिहरूको लागि चिनिन्थ्यो। उनको उपनाम एक ट्रस्ट बस्टर थियो किनभने उनको प्रशासनले रेल, तेल, र अन्य उद्योगहरुमा भ्रष्टाचार विरुद्ध लड्नको लागि विद्यमान अविश्वसनीय कानुन प्रयोग गर्यो। ट्रस्ट र श्रम सुधार सम्बन्धी उनको नीतिहरू तिनले "स्क्वायर डील" भनिन्।
यूटन सिन्क्क्लेयरले मासु प्याकेजिङ्ग उद्योगको न्युज द जंगलमा घृणित र असमानतापूर्ण प्रथाहरूको बारेमा लेखे। यसले फलफूल निरीक्षण र 1906 मा शुद्ध खाद्य र औषधि अधिनियमहरूमा परिणत गर्यो। यी कानुनहरूले सरकारलाई मासु निरीक्षण गर्न र खतरनाक हुन सक्छ कि खाद्य र लागूपदार्थहरूको सुरक्षा गर्न आवश्यक छ।
रुसवेल्ट उनको संरक्षण प्रयासका लागि राम्रो थियो। उहाँ महान संरक्षणवादीको रूपमा चिनिनुभयो। आफ्नो समय कार्यालयको दौडान राष्ट्रिय वनमा 125 लाख एक सय भन्दा बढी एकजना सार्वजनिक सुरक्षाको अधीनमा राखिएको थियो। उहाँले पहिलो राष्ट्रिय वन्यजीवनको शरणस्थान पनि स्थापना गर्नुभयो।
सन् 1979मा रुसवेल्टले जापानसँग सहिष्णुताको सम्झौताको रूपमा चिनिने एक सम्झौता गरे जुन जापानले श्रमिकहरुलाई अमेरिकाको आवृत्ति सुधार्न र आदानप्रदान गर्नमा अमेरिकालाई चीन बहिष्करण अधिनियम जस्तै कानून पारित गर्दैनन्।
Roosevelt 1908 मा भाग्यो र न्यूयर्क ओसिटर खाडीमा सेवानिवृत्त भयो। उनी अष्ट्रेलियालाई सफारीमा गए जहाँ उनले स्मिथसोनियन संस्थानको लागि नमूना एकत्र गरे। यद्यपि उहाँले फेरि भाग्न प्रतिज्ञा गर्नुभएको थिएन, उनले 1912 मा रिपब्लिकन नामांकनको खोजी गरे।
उहाँले हराएको बेला, उहाँले बुल मोस पार्टी गठन गर्नुभयो। उनको उपस्थितिले मतदानको कारण भङ्ग्रो विल्सनलाई जित्न अनुमति दिन्छ। Roosevelt 1912 मा एक हत्यारा हुनेछ द्वारा गोली मारिएको थियो तर गम्भीर चोट लागेको थिएन। उनी कोरोनरी इम्बेलिज्म को जनवरी 6, 1919मा मरे।
रोस्वेल्ट एक अस्थायी व्यक्तिवादी थियो जुन 1900 को शुरुवात को अमेरिकन संस्कृति को संगत गरे। उनीहरूको संरक्षणवाद र ठूलो व्यवसायमा लिन इच्छुकताहरू उदाहरणका लागि उनीहरूलाई राम्रो राष्ट्रपतिको रूपमा मानिन्छ। तिनका प्रगतिशील नीतिहरूले 20 औं शताब्दीको महत्त्वपूर्ण सुधारको लागि चरण तय गर्यो।
पुस्तक आविष्कार अब्राहम लिंकन थियो समलैंगिक
विलियम हेनरी हैरिसन फास्ट तथ्य
जेम्स बुकानन, संयुक्त राज्य अमेरिका को पांचौं शताब्दी
वारेन जी। हार्डिंग को बारे मा जान्न को लागि दस चीजें
राष्ट्रपति नियुक्ति: कुनै सीनेट आवश्यक छैन
एन्ड्रयू जैक्सन - संयुक्त राज्य अमेरिका को7वें राष्ट्रपति
अब्राहाम लिंकनको सबैभन्दा ठूलो भाषण
Woodrow विल्सन को बारे मा जान्न को लागि दस चीजहरु
जॉन एडम्स फास्ट तथ्य
ड्वाइट इइसेनहावरको बारेमा दस कुराहरू थाहा पाउनुहोस्
सूची कलेज प्रवेश
कहिल्यै बाँचेको सबैभन्दा ठूलो बग
घोडा र निस्सन्देहको लागि तर्क
प्रसिद्ध इतिहास उद्धरण
शुरुवातको ट्रयाक र फिल्ड: शट सिकाउनुहोस्
चित्रा स्केटिङ टेस्ट र स्तर बुझ्न
परिभाषा र व्यापार र उदाहरणहरूको उदाहरण
नि: शुल्क चढाइ के हो?
दोस्रो विश्वयुद्ध: एडमिरल फ्रैंक जै फ्लेचर
बाइबलको बारेमा के भन्नुहुन्छ
VB.NET मा थ्रेडिंग को एक परिचय
एक मुखौटा के हो?
शीर्ष 10 पूल पार्टी गीतहरु
एक्सेलको होलोकअप प्रकार्य
सनफिश: एफेष्ट लेक वा शहरी सेलबट
पाठ र कवितामा ध्वनिको चित्र
शीर्ष5अनलाइन एसपी प्याकेज सम्झौता
ग्रेज पप गीत विरासत
अधिकतम र न्यूनतम के हो?